Dubbi-himaan mootummaa Oromiyaa Addisuu Arggaa milishaa 230000 leenjifnee bobbaafne jedha.. -
Dubbi-himaan mootummaa Oromiyaa Addisuu Arggaa milishaa 230000 leenjifnee bobbaafne jedha..
bilisummaa August 20, 2017	Leave a comment
“Dirqama Mootummaa keessaa inni ijoon nageenyaa fi tasgabbii uummataa kabajichiisuu akka ta’e ni beekama. Kana galmaan gahuuf jecha MNO bara kana milishaa 230,000 leenjisee bobbaasee jira.” Kana kan jedhe dubbi-himaa mootummaa Oromiyaa Addisuu Arggaa Qixxeessaa, Adooleessa 3, 2017
Waraanni dilli kun eessa dhaqeree gaafa yartuun daangaan ceetee ummata keenya fixxu? Moo lakkoofsi sun duraanuu kan kijibaati?
Previous Ethiopian PM, others summoned by court as witnesses in terrorism trial
Next Ummata keenya daangaa irratti dhumaa jiru cinaa dhaabbannee guyyaa ayyaana #Arafaa….